दिदीको चाकको प्वाल - Nepali Sex Tube
दिदीको चाकको प्वाल
तिमीले पोर्न हेरेको छौ?’ दिदीले कट्टु बाहिरबाटै लाडो समातिदिदै कानमा आएर साउती मार्नु भयो…
रातीको १० बजे बजार पुरै सुनसान थियो। म लुसुक्क फार्मेसी पुगे। दिदी मलाइ पर्खेरै बसेकी रहेछिन्। म भित्र छिरेपछि ढोका बन्द गरेर हामी माथिल्लो तलामा उक्लियौ।
दिदीले माथी पुग्नासाथ नाइट गाउन खोल्नुभयो। भित्र कालो ब्रा र पेन्टी देख्दा त्यो कोरियन केटीको याद आयो। तर दिदी कति बढी राम्री थिइन म तुलनै गर्न सक्दिन।
‘तिमीले पोर्न हेरेको छौ?’दिदीले कट्टु बाहिरबाट मेरो लाडो समात्दै कानमा आएर साउती मार्नु भयो।’हेरेको छु।’
‘तिमी खाटमा बस, म देखाउछु तिमीलाई आज शो।’, दिदीले मेरो हात समातेर आफ्नो स्तनमा लगि अठ्याउनु भयो। दिदीका टाइट स्तनको स्पर्शले मेरो लाडो पुरै ठन्किसकेको थियो। ब्राको बाहिरै बाट मैले मन लागेसम्म दिदी स्तन माड्न थाले। दिदी आँखा चिम्म गरेर आनन्दित हुनु भयो।
दिदीले मलाइ खाटमा धकेल्नु भयो। अनि मेरो अगाडी उभिएर अनेकन हाउभाउ सहित शरीर देखाउन थाल्नु भयो। दिदी घरी ओठ टोकेर कामुक नजर दिदै आफ्नो स्तन चलाउनु हुुन्थ्यो त कहिले दुवै हातले कम्मर देखि सुम्सुम्याउँदै आफ्नो साँप्राहरु मुसार्नु हुन्थ्यो। अनि पेन्टी भित्र हात हालेर पुति चलाउँदै मतिर हेर्दै एउटा औला मुखले चुस्दै इशारा गर्नु हुन्थ्यो।
‘मेरो बुब्स कस्तो लाग्यो?’दिदीले दुवै हातले स्तन उचाल्दै सोध्नु भयो ?’तिमीले सेक्स गरेको केटीको भन्दा ठूलो छ ?’, मैले जवाफ नदिदै फेरी सोध्नुभयो।
‘तपाइको धेरै ठूलो छ। उसको त भर्खर त आउन थालेको छ। तर उसको बुबुमा किस गर्दै मुन्टा चुस्न भने साह्रै मज्जा आउँछ।”मेरोमा झन् मज्जा आउँछ। तिम्रो पार्टनर सानै उमेरको हो त्यसो भए ?”अँ, मेरै उमेर जस्तै हो। तर तपाइको झन् सेक्सी छ। त्यो मुखबाट जिब्रो निकालेर सेक्सी बन्नु न फेरी।’, मैले कट्टु खोलेर ठन्किएको लाडो निकालेर आफै चलाउन थाले।’के हो, देख्दैमा सहन सकेनौ क्या हो?’, दिदीले मैले भने झै गरी जिस्काइन।’हस्तमैथुन गर्दा कसलाई सम्झिन्छौ ?’, दिदीले सिधा प्रश्न गरिन।’खै, दिन हेरेर हुन्छ, धेरै जना छन्।”मैले चिनेको कोही छ ?”अँ, तल्लो पसलको रुमा दिदी।”हाहा, हो र? रुमा मन पर्छ तिमीलाई ?”अँ, मन पर्छ। राम्री हुनुहुन्छ।”अनि के सम्झिन्छौ नि रुमाको?”त्यही, दिदीको साँप्रा, अनि बुब्स।”देखेको छौ र?’
‘अँ, नुहाउँदा म र रमेश भएर माथिल्लो तलाबाट हेर्दै थियौ। दिदीले वरिपरि मान्छे नदेखेपछि पेटिकोट हटाएरै हतार हतार दुध माड्न थाल्नुभयो। त्यही बेला देखेको।’
‘बोकै रहेछौ त तिमीहरु त, यति सानै उमेरमा, त्यही भएर हो, तिम्रो लाडो यति ठूलो भएको ?”खै, होला, ठन्किदाँ त ठूलो भइहाल्छ नि।”अनि यति ठूलो चिज तिमीले तिम्रो केटीकोमा हाल्दा उसलाई दुखेन त? सानै छे भनेको होइन?”दुख्यो होला नि, कराएकी थिइ। मुख थुन्नु परेको थियो। रगत नै रगत भएको थियो।”भनेसी बिचरीको सिल तोड्दियौ?”अँ, तपाइले त धेरै पटक सेक्स गर्नु भयो होला है?”किन त्यस्तो लाग्यो तिमीलाई ?”तपाइको बुब्स यति ठूलो छ। धेरै सेक्स गरेपछि बुब्स ठूलो हुन्छ होइन र?’उनी हाँसिन। ‘हुन्न लाटा त्यस्तो। तर सेक्स त गरेको छु। कलेज पढ्दा ब्वाइफ्रेन्डहरु थिए। तर सालेहरु कहिल्यै लामो समय टिक्न सक्थेनन। तिमीले सेक्स गर्दा कति बेर गर्न सक्छौ ?”खै, ३०-४० मिनेट जस्तो!”वाफरे, हो र? ल मज्जा हुने भयो। गर्न त मन छ नि मसंग।”मन छ नि दिदी, त्यस्तो ठूलो बुब्स देखेपछि नै चुस्न मन लागेको थियो। हेर्नु त तपाइलाई देखेपछि मेरो लाडो ठन्किएर पानी पानी भइसकेको छ।”अँ, देखिरको छु। मेरो बुब्स हेर्छौ ?”फुकाल्नु न त त्यो ब्रा।’, मैले डिमान्ड गरे।
दिदीले ब्रा फुकालेर म तिर फालिन। मैले त्यो लामो स्वासले सुघेँ। दिदीको बास्ना र पर्फ्युमको बासना मिक्स भएको थियो। यस्तो कामुक सेन्ट, मन नै हरर भयो।
दिदीको सेतो बुब्स, टाइट तर ठूलो, हेर्दै खाम खाम लाग्ने। अनि कैलो रंगको मुन्टा, ठन्किएर घोच्ला जस्तो भएको थियो।
‘दिदी यही आउनु न खाटमा।’
उनी खाटमा आइन। अनि मेरो मुख छेउ आफ्नो स्तन लगेर माडिदिइन। मैले दुवै हातले दिदीको स्तन समाते। स्तनको मुनी पसिना पनि आएको थियो। मलाई किन किन त्यो चुस्न मन लाग्यो। दिदीको दुध संगै वरिपरि चुस्न, चाट्न थाले।
दिदीले मेरो लाडो समातेर बिस्तारै हल्लाउन थाल्नु भयो। दिदीको हल्लाइ अर्कै प्रकारको थियो। टुप्पा देखि तलैसम्म जान्थ्यो दिदीको हात। टुप्पामा समात्दा सिरिङ्ग हुन्थ्यो। थोरै पानी निस्कन्थ्यो, अनि दिदीको हात भित्र लाग्थ्यो। बिस्तारै तल सम्म हात पुर्याउँदा त्यो पानी लाडो भरी लाग्थ्यो। एकैछिनमा दिदीको हात र मेरो लाडोको छाला सबै चिप्लो भयो। त्यसपछि त यस्तो मजेदार ढंगले दिदीको हात मेरो लाडो समात्दै तलमाथी गर्न थाल्यो। झनै पुतिमै चिकेको जस्तो मज्जा आउन थाल्यो।
मेरी बहिनीलाई यो कला आउँथेन। कास उसलाई यो कसरि गर्ने सिकाउन पाए, अनुशाको कामुक अनुहारको याद आयो।
म दिदीको बुब्स चुस्नैमा मस्त थिए। अनि दिदीले मलाई माथी उठाएर किस गर्नु भयो। त्यसपछि सुरु भयो असली टङ किस। दिदी अति नै आक्रामक शैलीमा मलाइ किस गर्न थाल्नु भयो। ओठ र जिब्रो चुस्न थाल्नु भयो। दिदीको तातो थुक मेरो मुख भरी भयो। अनि मैलै दिदीको जिब्रो चुस्दा मेरो मुखको थुक सबै दिदीकोमा सर्थ्यो। हामी पुरै र्याल नै र्याल भयौ। दिदीको बुब्स भरी थुक चुहिएको थियो। झन्डै आधी घन्टा हामी लडिबुढी गर्दै किस गर्दा ओछ्यानको तन्ना सबै भुइँमा खसिसकेको रहेछ। सिरानी र सिरकको अवस्था दयनीय थियो।
दुवै थाकेर रातो भएको थियौ। दिदीले 69 पोजिसनमा बसेर मेरो लाडो चुस्न थाल्नु भयो। अनुशाले झै दिदीले पनि लाडो पुरै मुखमा हाल्दै, टुप्पोमा किस गर्दै चुस्न, चाट्न थाल्नु भयो। यता म भने दिदीको कालो रौको झ्याङमा आफ्नो जिब्रो चलाउन थाले।
अनुशाको भन्दा विल्कुलै फरक थियो दिदीको पुति। अनुशाको यस्तो जंगल थिएन। यहाँ त कालाकाला रौं थिए। यसको गन्ध विल्कुलै फरक थियो। अनुशाको जस्तो कलिलो बासना थिएन। कुनै फक्रिएको फुलको जस्तो, तर बासनाको कडापन भने अनुशाकै बढी थियो। रौं रौं चुस्दै, म दिदीको पुति नेर पुगे।
यसको रंग र आकार आकास जमिन फरक थियो। अनुशाको पुति बाहिर सेतो अनि भित्रको ओठ रातो थियो। तर दिदीको त्यो रातोपन अलि गाढा थियो। झट्ट हेर्दा थोरै कालो मिसिएको रातो जस्तो। तर ओठ ठूला ठूला थिए। मैले चुस्दा मुख भित्र त्यो पुतिको बाहिर झुन्डिएका डल्लाहरु सबै आए, अनि संगै भित्र मुल फुटेर निस्केको तातो चिप्लो पानी पनि मुख भरी भयो। जब जिब्रोले पुति भित्र चलाउन थाले तब थाहा भयो अनुशाको कति टाइट रहेछ भनेर। दिदीको टाइट त थियो तर आकार ठूलो भएकाले मेरो जिब्रो सहजै भित्रै सम्म पुग्थ्यो।
दिदीको पुतिको माथिल्लो भागमा भएको त्यो आनन्दको बिन्दु अनुशाको भन्दा निकै ठुलो थियो। सानो लाडो जस्तै। साह्रो थियो। मैले औलाले मुसारे, दिदीको चाक उत्तेजनाले उफ्रियो।
‘दिदी यो के हो ?’
‘त्यसलाई क्लिटोरिस भन्छन्। टिसी भन्छन् सामान्य भाषामा बोल्दा। त्यो चलाउँदा सबैभन्दा बढी मज्जा आउँछ केटीहरुलाई।’
‘त्यहि भएर पो उसको पनि यो चलाउँदा उ सिरिङ्ग सिरङ्ग हुन्थी।’, मैले दिदीको चलाउँदै भने।
दिदीको पुतिबाट ह्वाल ह्वाल पानी आयो। अनुशाकै सम्झेर मैले त्यसको पुरै स्वाद लिए। तर स्वास र बासना अनुशाको जस्तो थिएन। अलिक बढी बाक्लो थियो। अनि सेन्ट पनि कडा थियो। तर मलाई झनै मन पर्यो। दिदीको पुति चुस्दाको आनन्दले म पुरै डुबिसकेको थिए।
दिदिले मेरो लाडो चुस्न बन्द गरेर खाटमा घोप्टे परेर सुत्नु भयो। अनि मलाई साँप्राको मुनीबाट पुति चुस्न भन्नु भयो। यसरी त मैले अनुशाको पनि चुसेको थिइन।
म साँप्राको मुनि छिरेर दिदीको पुति चाट्न, चुस्न थाले। यसो गर्दा खै किन हो दिदी चाडै ह्वाल ह्वाल हुनु हुन्थ्यो। अनि दिदीको पुतिको बाक्लो पानी मेरो अनुहार भरी पर्थ्यो। जति चाटेपनि धित नै मरेको थिएन। झण्डै आधी घन्टासम्म चुस्न चाट्ने गर्दै दिदीको टिसी खेलाइरहे। दिदी आधा दर्जन भन्दा बढी पटक स्खलित हुनुभयो। प्रत्येक पटक दिदीको स्खलन पहिलेको भन्दा छिटो र धेरै मात्रामा हुँदै थियो। यो अन्तिम पटकको स्खलनमा त दिदीको शरिरले पुरै काँपेको थियो। पुठो बुरुक्क बुरुक्क उचालियो। सिरानीमा मुख राखेर दिदी मन्द कराइरहनु भएको दिदीको आवाज झन् झन् बढेको थियो। मैले पुति सबै चाटिसके, पुरै अघाएको जस्तो भएको थियो।
‘ल अब अलिक फरक गर्ने है त’, दिदीको दबेको आवाजले मन नै कामुक बनायो।
दिदीले मेरो लाडो फेरी चलाउन थाल्नु भयो। यो पटक आफ्नो पुतिमा हात हालेर त्यसको पानी निकालेर मेरो लाडोमा दल्नु भयो। अनि मेरो औला समातेर आफ्नो पुति भित्र छिराउनु भयो, औला भरी चिप्लो पानी टाँसियो, अनि त्यो लगेर दिदीले चाकको प्वालमा दल्न लगाउनु भयो।
‘चाकमा चिकेको छौ ?’, दिदीले सोध्नु भयो।
‘छैन। मज्जा हुन्छ।’
‘मज्जा हुन्छ। तर चाकमा चिप्लो पानी हुन्न त्यसैले अलिक गाह्रो हुन्छ सुरुमा, तिमीले जानेनौ भने मलाई दुख्छ। यहाँबाट चिप्लो पानी निकालेर मेरो चाकको प्वालमा दल, भित्रैसम्म हाल है औला घुसारेर।’
सुरुमा त मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। चाकमा चिक्ने कुरा सुन्दै कस्तो घिन लाग्ने। तर यो नग्न सुन्दरीको चाक पनि त सुन्दरी कै चाक हो नि, अरै गरैको चाक हो र ?
दिदीको चाकको प्वाल चुमुक्क परेको थियो। पुति जस्तो खुल्ला थिएन। सानो प्वाल केही छिर्छ जस्तै नलाग्ने।
दिदीको चाकको प्वाल बाहिर पुतिको पानी दल्न थाले।
‘पख है।’ दिदीले खाटको घर्रा खोलेर एउटा सानो बट्टा दिनुभयो। भित्र कुनै खालको तेल थियो।
‘यो दल भित्र’, मैले बिर्को खोलेर हातमा हाले। बासनादार थियो। तेल भन्दा अलिक बाक्लो तर अति नै चिप्लो थियो।
मैले दिदीको चाकको प्वालबाट त्यो भित्र छिराए।
अनि मेरो लाडोमा थोरौ दलेर दिदीको चाकको प्वालमा ठेले।
‘ऐया… दिदीले जोडले सिरानी समात्नु भयो।’
मैले अलिकति तेल अझै हालेर ड्याम्मै हुले, लुत्त छिर्यो। तर दिदी भने ‘दुख्यो… ऐया’ भनेर च्याठ्ठिनु भयो।
दिदीको पुठोमा हातले ड्याम ड्याम हान्दै चाकको प्वाल चिक्न थाले। पुति जस्तो थिएन। निकै टाइट भएकाले मेरो लाडोको टुप्पा देखे फेद सम्मै जोडले अठ्ठिएको थियो। करिब १०-१५ मिनेट दिदीको चाक भित्र उफ्रिएपछि म शिथिल भए। खाटमा लडे। दिदीले पानी ल्याएर मेरो लाडो सफा गर्दिनु भयो। अनि स्प्रिटलगाएर चिसो बनाइ सफा कपडाले पुछिदिनु भयो।
म आधी घन्टा जति संगै सुतेर रातको १२ बजे त्यहाँबाट लुसुक्क निस्किएर घर तिर लागे। त्यो तेलको बट्टा मैले संगै ल्याए।